Nnwom 7 NA-TWI - Atemmu mpaebɔ - O Awurade, me - Bible Gateway
Nnwom 6Nnwom 8
Nnwom 7 Nkwa Asem (NA-TWI)
7 O Awurade, me Nyankopɔn, meba wo nkyɛn sɛ bɔ me ho ban. Gye me fi wɔn a wɔtaa me no nsam. 2 Na wɔansoa me ankɔ sɛ obi a gyata akyere no a obiara rentumi nnye me nkwa na wɔatetew me mu asinasin. 3 O Awurade me Nyankopɔn, sɛ mayɛ obi bɔne, anaasɛ mayi obi ama, anaasɛ mayɛ obi a ɔne me te yiye bɔne a, 4 anaa mebɔ me tamfo korɔn kwa a, anaa mayɛ eyinom mu bi a, 5 ma m’atamfo ntaa me nkyere me; ma wontwa me nhwe fam na wonkum me na wonnyaw me funu wɔ fam.